दूर्जेय चेतना: सकरात्मक तर प्रगतिशील आत्मविश्वास
Browse » Home » विचार » सकरात्मक तर प्रगतिशील आत्मविश्वास
13 comments to “सकरात्मक तर प्रगतिशील आत्मविश्वास”
dai, maie padhe.ramro lagyo.ho ni hami tha pai pai pani naramro kam gariraaheka hunchhau.malai article bhanda pani ajha tapaiko lekhne saili dherai ramro lagyo.simple and clear.
उदाहरण सहित सहि विश्लेषण दिनु भएको रहेछ | धन्यबाद | सकारात्मक आत्म बिश्वाशले धेरै कुरालाई सहि बाटोमा हिंडाउन सकिन्छ |
शिर्षकको प्रगतिशील शब्दले भने झन्डै अल्मल्यायो !
मिलनजी प्रतिक्रियाको लागि धन्यबाद। मैले नअल्मलनकै लागि अन्त्यमा "प्रयोग गरिएका कुनै पनि शब्द बा भनाईहरु बिल्कुल निरपेक्ष छन्।" भन्ने वाक्य राखेको हुँ
प्रगतिको बाटो हिड्न, सामाजिक विकृति र विसंगतिको समुल नाश गर्न सबैलाई यस्तो आत्मविश्वासको खाचो छ, आज । यो त्यहि आत्मविश्वास हो जसले बाध्यताहरुलाई पनि परास्त गर्ने हिम्मत राख्नेछ ।
प्रगति र आत्मबिश्वासको रेखाङकन गर्नलाई पक्कै सकारात्मक सोच र निस्वार्थ भावनाको बिकाश हुनु जरुरी छ ।
यथार्तबादी चिन्तनको बिषय बाँडनु भएकोमा धन्यबाद ।
सबैलाई त थाहा छैन तर आफैलाई चाहि केही केही चेतना भया।
एकदमै रचनात्मक सोच !
असल र खराबको भेद भएर वा भेउ पाएर पनि खराब कार्यमै लिप्त हुनुमा पक्कै पनि आत्मविश्वासकै को कमि नै प्रमुख कारण होला ।
बाँकी कैलाशजीको शब्दहरु दोहर्‍याउँछु म पनि:
यो लेख हजुरको विचार मात्रै होइन ध्रुब सत्य कुरो हो। मलाई यो लेख पढेर छुट्टै किसिमको आत्मविश्वास बढ्यो.... साच्चै !!
धन्यवाद है :)
हरेक ब्यक्तिले आफनो नकारात्मक सोचाई, बानी र भावनालाई परिवर्तन गरेर सकारात्मक सोचाई बानी र भावनालाई आफ्नो नेतृत्वमा स्थान दिनु नै आजको हाम्रो आवश्यक्ता रहेको छ ।
durjaya jee , sarhai ramro lekh sakaratmak soch banaaunako lagi kehi had samma yo lekh le saghaune chha .
कुरो ठीक हो.. तर एस्तो नैतीक शिक्षा छाटेर मात्र के हुन्छ ?
सबै कुरा आफ्नै सोचमा निर्भर गर्छ ! अत: नराम्रो हुँदैमा सकरात्मक अनि राम्रो हुँदैमा सकरात्मक हुँदैन । कसैले आफूले पढ्न को लागि चोरी गरेको हुँ भन्छ भने, भावनात्मक रुपले सहि मान्न सकिएपनि, यो नराम्रो कामलाई सकरात्मक लिन सकिँदैन ।
अनि कराएर मात्र परिवर्तन हुने हैन, क्रान्तिकारी पनि हुने हैन ! जब हृदय ले यसो नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छ अनि सकरात्मक विचार आउँछ या भनौँ नकारात्मक विचारहरु माथि सकरात्मक विचार ले नजिते सम्म केही हुँदैन । कहिलेकाँहि सोचाइ नै नकरात्मक बनिदिन्छ भने कहिले काँहि त्यही कुरा एकदम सकरात्मक बनिदिन्छ । प्रगतिशिल हुनु भनेको सकारात्मक सोच्नु मात्र पनि होइन, कुनै कुरा को नकरात्मक र सकरात्मक पाटोलाई विश्लेषण गर्न सकियो भने, प्रगतिशिल मानिएला हैन र, अर्जुन जी ?
हावाजी: नैतिक शिक्षा गरेरै, भनेरै र सिकाएरै हुने कुरा हो। यो जन्मजात कसैलाई पनि हासिल हुदैन। मानौ मेरो सानो बच्चाले चक्लेट खाएर, चक्लेटको कागज भुईमा फाल्यो भने र ड्स्बिनमा राखेन भने, यो समाजले एक पुस्ता कुर्नु पर्छ कम्तिमा सफा र फोहोर नगर्ने अबस्था कुर्न। सिकायौ भने अहिलेनै र यो पुस्तामा नै सफा र बिबेकशिल समाजको आशा गर्न सकिन्छ र हुनेछ। हैन र?
आकारजी: पठ्नकै लागि कसैले पुस्तक चोरेको छ भने मैले पनि कतै सकरात्मक सोच भनेको छैन। चोर्नु कसै पनि सकरात्मक हुदैन। निरपेक्ष प्रगतिशिल हुनुलाई सकरात्मक भनेको र मानेको पनि छैन। परिबर्तित र समयअनुकुल हुनु पर्छ सोच भन्ने मात्र हो। कुनै पनि बेला वा परिस्थितीमा नकरात्मक सोच कसै गरि पनि सकरात्मक हुनै सक्दैन। ब्यक्ती बिशेष र परिस्थिती बिशेषको सोचले कहिलै पनि नकरात्मक सोचलाई सकरात्मक मान्छौ भने, हामीले पुरै रुपमा नकरात्मक सोच माथीको बिजय हासिल नगरेको मान्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। र जब सम्म यो सोचमाथि बिजय हुदैन तपाईलाई मात्र हैन हो कोहीलाई पनि यस्तो लाग्नु नौलो हैन। तर कुनै कुराको नकरात्मक र सकरात्मक पाटोलाई विश्लेषण गर्न सकियो भने, प्रगतिशिल मानिएला भन्नै तपाईको बिचार उत्तम छ र म सहमत छु र मेरो लेखको मनसाय पनि यहि हो। सकरात्मक प्रतिक्रियाको लागी धन्यबाद है।